Ogaden News Agency (ONA) – Halgamayaalku wixii Guul ah oy Cadowga ka gaadhaan, waxaa looga qorayaa Camal suuban! By: Xaaji M/Rashiid Suuratu Towbah, Aayada 120 aad- وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
Halgamayaalku wixii Guul ah oy Cadowga ka gaadhaan, waxaa looga qorayaa Camal suuban! By: Xaaji M/Rashiid Suuratu Towbah, Aayada 120 aad- وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
Posted by Daljir	/ April 24, 2016
Halgamayaalku wixii Guul ah oy Cadowga ka gaadhaan, waxaa looga qorayaa Camal suuban!
Bismillaah Alxamdu Lillaah- Dadkii la socday qaadaa dhiga Aayadaha Qur’aanka kariimka ah ee sida tooska ah ula fangalaya halganka jwxo waxaan maanta wadaagaynaa aayadan aad ciwaanka kasoo dheehateen. Waxaa jirta arrin bani’aadamka oo dhani kasiman yahay oo ah, inayna cidina ogolayn iska shaqee ee laba mid umbuu ku hawl,gali karaa halgamaagu- waa mida horee in loo ballan qaado shay maado ah sida Mushaharka, abaal marin iyo wixii al mid ah. Tan laabaad oo ah inuu ku hiranayo abaalgud aakhiro, sida in loo dambi dhaafayo iyo in la gaynayo janno, waxaana arintan gaar uga faa’iidaysta kaliya cida Allaah iyo aakhiro rumaysan wanaana muslimiinta dabcan.
Waxaad la socotaan inuu dalka Ogadenya kasocdo halgan ay dhuxuluhu ka duulayaan oo dhexmaraya Ciidanka xaq u dirirka ah ee lagu soo gaabiyo JWXO iyo kooxda TPLF oy waheliyaan calool u fikirayaal la isku soo jaabajaabeeyay inkasta oy hada wadadii kala cararka cagta saareen, kadib kolkii mid walba lagu amray inuu kamid noqdo ciidanka reerkooda ku duulaya ee waliba si’ aan kala sooc lahayn birta uga aslaya. Kuwaas oona doonayn inaan hadal badan ku bixiyo ayaa waxaa ku dhaboobay xikmadii somalida ee ahayd Doqonta Usha agteeda ku dhufo, haday garan waydana gogeeda ku dhufo, markii dabaqoodhiyadii qowmiyadaha mid walba Buulkoodii iyo Beertoodii Dab lasudhay ayuu baraarugay!
Aan usoo laabto ujeedkiiye, hadaan soo taabtay inayna cidina aqbali karin iska shaqee oo iska dagaalan oo iska dhimo, waxay su’aashu tahay Ciidanka Naftood,hurayaalka JWXO ileen mushahar uma xaadiraan markay bishu dhamaato ama sanadku dhamaado ee maxay higsanayaan. Aniga waxay ila tahay inay kow ka tahay iyagoo muslimiin ah oo aaminsan inay xaq kutaaganyiin, maadaama waxay u gargaarayaan uu yahay dadkooda ducafada iyo maxasta ah iyo inay difaacayaan dalkooda khayraadkiisa iyo diintoodaba. Waxaa kale oy Qalbiga ku qaboojiyaan inay dhanka Rabi ka heli doonaan Dambi,dhaaf iyo Janno oo ah laba Hadiyadood oo qaali ah oyna cid waliba heli karin ilaahay ciduu iska siiyo mooyee!
Ciidanka JWXO ayaa la aamisanyahay inay galaan safarro dhaadheer iyo Guure, waxaa hubaal ah inay dardarayaan Qoofal iyo Qodxo. Waxaa kale oo qasab ah inay la kulmayaan Halaqyada halista ah, sida Masaska Abeesooyinka, Hangaralaha(Dabaqalooca) IWM. Waxaa kale oo la aamisanyahay inay mararka qaar meelo isku dhow kuwada baryaan Libaaxda iyo Dhurwaada IWM. Waxaa kale oo la aaminsanyahay inay ka talaabayaan Laago iyo Togag ama ay fuulayaan meelo dhaadheer sida Buuraha, Jiiraha iyo IWM. Waxaa iyana dhab ah inay Naftood,hurayaalku la kulmayaan bahasha gaajada ah ee xanuunka badan oo dad badan oo Soomaaliyeed
Qaxootiga ka galeen sabankan. Waxaas oo dhan waxaa halgamaaga looga qorayaa camal suuban. Waxaa sidoo kale camal suuban looga qorayaa wax alaale wixii dhaqaale ah oo kaga baxaya halganka ha badnaado hase yaraadee. Waxaa cajiib ah in haday cagta saaraan goob cadowga cadho galinaysa iyadana looga qorayo camal suuban. Aayada oo xustay qaybo kamid ah hagardaamada uu halgamaagu la kulmi karo ayaan anigu faa,faahiyay guud ahaan dhibaatooyinka hayjada ee sidaa ula socda.
Faqradan kooban een Aayda kasoo goostay ayaa inoo sheegaysa markii la fasiro in goorta halgamayaalku cadowga dhibaato gaadhsiiyaan looga qorayo camal suuban, sida haday laayaan ama qafaashaan ama hanti kala soo hadhaan ee sow ma’aha markaas waxaagii wax laguugu dar iyo Kurus-
Suuratu Towbah, Aayada 120 aad- وَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
Isku soo wada jamciyoo Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya ayaa diiday wax aan ka ahayn inay soo xasiliyaan karaamo Aduunyo ama Geeri sharafeed oy markaa helaan Raxmadii Eebe,wayne ee Janada!